ပန်းပဲ ဆရာကြီးရဲ့ ဆုံးမစကား (လူငယ်တိုင်း မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။) - Myanmar Media
ပန်းပဲ ဆရာကြီးရဲ့ ဆုံးမစကား (လူငယ်တိုင်း မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။)
တစ်နေ့မှာ ကောင်လေးတယောက်ဟာ ဓားကျိုးလေး နှစ်စကိုင်ပြီး အဖိုးဖြစ်သူ ပန်းဘဲဆရာထံ ရောက်ခဲ့တယ်….
“အဖိုးရေ အဖိုး အဖိုးရေ….” ” ဟေ..! ဘာလဲကွ မင်းမှာလည်း အလန့်တကြားနဲ့ ဘာကိစ္စရှိလို့လည်းကွ….” ထိုအချိန်မှာ ကောင်လေးဟာ မျက်ရည်စလေးဝဲပြီး တခုခုကိုကြောက်ရွံ့သော အနေထားဖြင့်….
“ဟိုလေ…! အဖိုး မနေ့ကသား ကျောက်တုံးကို ခုတ်ကစားနေရင်း ဓားမကြီးက ကျိုးသွားလို့ပါအဖိုး အဖေပြောတယ် ဓားအသစ်မရရင် အိမ်မပြန်လာနဲ့တဲ့ သားကို ကယ်ပါဦးအဖိုးရယ် ဓားမှမရရင် သားအိမ်ပြန်မရဲလို့ပါ….”
” မင်းကလည်းကွာ တတ်တတ်ဆန်းဆန်း ကျောက်တုံးကိုမှ ဓားနဲ့ခုတ်ရတယ်လို့ကွာ…” ” ဟာ အဖိုးကလည်း သားပထမ အစမ်း ခုတ်ကြည့်ပြီးပါပြီဗျ ဓားကမှ ဘာမှမဖြစ်တာ သားက ဒီဓားကိုယုံကြည်လို့ ကျောက်တုံးကို အပြတ်ခုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်မိတာပါ…
“ဟေ…. မင်းကလည်းကွာ မင်းဓားက ဘယ်လာက် ကောင်းနေလို့လည်းဟ ဘယ်လောက်ထိ ကောင်းတဲ့ ဓားဖြစ်နေပါစေ မာကျောတဲ့အရာတခုကို ခုတ်ပါများတော့ သူဘယ်ခံနိုင်ပါ့မလည်းကွယ့်…ဒီမှာ ငါ့မြေးမှတ်ထား..! လောကကြီးဟာလည်း အဲဒီဓားတလက်လိုပါဘဲ ကိုယ့်မှာပစ္စည်းဥစ္စာ ပညာ၊အာဏာရှိတိုင်း သူတပါးကို ဘာပဲလုပ်လုပ် လုပ်လို့ရတယ်ထင်ပြီး အရမ်းမလုပ်နဲ့။ သူတပါး အကြောင်းမသိခင်မှာ တခါနှစ်ခါ အသာရချင် ရပါလိမ့်မယ် အခါများလို့ အကြောင်း သိလာရင် ပေါင်းမိပေါင်းရာနဲ့ ပေါင်းပြီး မင်းဘဝကိုပြာကျသွားအောင် သူတို့တတွေ လုပ် ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ငါ့မြေး သတိထားပါ…”
“ဟုတ်ကဲ့အဖိုး သားမှတ်ထားပါ့မယ်….” “အေးကွာ ကောင်းပါပြီ….ကဲလာ… ဖိုထဲသွားရအောင် ငါ့မှာလည်း တစ်ယောက် တည်းမို့ သံ မီးဖုတ်ဖို့ မီးမွှေးပြီး မင်း ဖိုဆွဲပေးရလိမ့်မယ်….”
“ဟာ…. အဖိုးကလည်း သားကမီးအပူမှ မခံနိုင်တာ မီးမဖုတ်ပဲ ဒီ အတိုင်းထုလို့မရဘူးလား အဖိုး….” “တယ်….! ဒီကလေး နဲ့တော့ ခက်တော့တာဘဲ အပူမပေးဘဲ ဒီအတိုင်းထုရင် မင်းယူလာတဲ့ ဓားနှစ်စက ငါ့ဆီရောက်မှ အစ,တစ်ရာ လောက်ဖြစ် သွားမှာပေါ့ကွ…မှတ်ထားပါ မြေးလေး..! ငါ့မြေးကို အဖိုးပြောစရာ တခုကျန်သေးတယ်…
“အပူဒဏ်မပေးဘဲ ဓားတလက်ကို လိုရာပုံသွင်း၍ မရတတ်သလို ဘာအပူပင်တခုမှ မရှိတဲ့ ဘဝတခုကိုလည်း လိုရာ ပုံသွင်းဖို့ ခက်လှပါတယ်…ဒါ့ကြောင့် မိဘနားနေ မိဘဆီမှာစားနေကြတဲ့ ငါ့မြေးတို့လိုအရွယ်က အပူမပေးထားတဲ့ဓားနဲ့ တူတယ်။ အခုလို မင်းအဖေက မင်းကိုအပူတတ်ပေးတာ မင်းကို ပုံသွင်းလိုက်တာနဲ့ တူတူပါဘဲ မြေးလေးရဲ့…
လောကမှာ ပူပင်ဒုက္ခတွေများလာလေလေ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အမြင်ကျယ်လေလေပါ။ အဲ့ဒီလို အမြင်ကျယ်လေလေ ကိုယ့်ဘဝအတွက် ကိုယ် လိုရာပုံ သွင်းလို့ရလေလေပါဘဲ မြေးလေး…မိမိဘဝ မိမိဒုက္ခနဲ့ မိမိရင်မဆိုင်ခင်အချိန်ဟာ. ! ဓားကောင်းတလက်ရရှိဖို့ ရိုက်နှက်ထုထောင်း ပုံသွင်းနေကြတဲ့ အဖိုးတို့လို ပန်းဘဲဆရာတွေ ရှိမှ ဖြစ်နိုင်သလို… ငါ့မြေးတို့ လို အရွယ်တွေအတွက် သားကောင်းရတနာ တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဟိန်းဟောက် ခြိမ်းခြောက် တတ်တဲ့ မိဘ ဆရာ သမားကောင်းတွေ ရှိမှဖြစ်မယ် ငါ့မြေးရဲ့….”
” သား နားလည်ပါပြီ အဘိုး….”
Credit: Ashin Marnita
#Unicode Version# ဖြင့်ဖတ်ပါ ။
တဈနမှေ့ာ ကောငျလေးတယောကျဟာ ဓားကြိုးလေး နှဈစကိုငျပွီး အဖိုးဖွဈသူ ပနျးဘဲဆရာထံ ရောကျခဲ့တယျ….
“အဖိုးရေ အဖိုး အဖိုးရေ….” ” ဟေ..! ဘာလဲကှ မငျးမှာလညျး အလနျ့တကွားနဲ့ ဘာကိစ်စရှိလို့လညျးကှ….” ထိုအခြိနျမှာ ကောငျလေးဟာ မကျြရညျစလေးဝဲပွီး တခုခုကိုကွောကျရှံ့သော အနထေားဖွငျ့ ….
“ဟိုလေ…! အဖိုး မနကေ့သား ကြောကျတုံးကို ခုတျကစားနရေငျး ဓားမကွီးက ကြိုးသှားလို့ပါအဖိုး အဖပွေောတယျ ဓားအသဈမရရငျ အိမျမပွနျလာနဲ့တဲ့ သားကို ကယျပါဦးအဖိုးရယျ ဓားမှမရရငျ သားအိမျပွနျမရဲလို့ပါ….”
” မငျးကလညျးကှာ တတျတတျဆနျးဆနျး ကြောကျတုံးကိုမှ ဓားနဲ့ခုတျရတယျလို့ကှာ…” ” ဟာ အဖိုးကလညျး သားပထမ အစမျး ခုတျကွညျ့ပွီးပါပွီဗြ ဓားကမှ ဘာမှမဖွဈတာ သားက ဒီဓားကိုယုံကွညျလို့ ကြောကျတုံးကို အပွတျခုတျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျမိတာပါ…
“ဟေ…. မငျးကလညျးကှာ မငျးဓားက ဘယျလာကျ ကောငျးနလေို့လညျးဟ ဘယျလောကျထိ ကောငျးတဲ့ ဓားဖွဈနပေါစေ မာကြောတဲ့အရာတခုကို ခုတျပါမြားတော့ သူဘယျခံနိုငျပါ့မလညျးကှယျ့…ဒီမှာ ငါ့မွေးမှတျထား..! လောကကွီးဟာလညျး အဲဒီဓားတလကျလိုပါဘဲ ကိုယျ့မှာပစ်စညျးဥစ်စာ ပညာ၊အာဏာရှိတိုငျး သူတပါးကို ဘာပဲလုပျလုပျ လုပျလို့ရတယျထငျပွီး အရမျးမလုပျနဲ့။ သူတပါး အကွောငျးမသိခငျမှာ တခါနှဈခါ အသာရခငျြ ရပါလိမျ့မယျ အခါမြားလို့ အကွောငျး သိလာရငျ ပေါငျးမိပေါငျးရာနဲ့ ပေါငျးပွီး မငျးဘဝကိုပွာကသြှားအောငျ သူတို့တတှေ လုပျ ဆောငျနိုငျတယျဆိုတာ ငါ့မွေး သတိထားပါ…”
“ဟုတျကဲ့အဖိုး သားမှတျထားပါ့မယျ….” “အေးကှာ ကောငျးပါပွီ….ကဲလာ… ဖိုထဲသှားရအောငျ ငါ့မှာလညျး တဈယောကျ တညျးမို့ သံ မီးဖုတျဖို့ မီးမှေးပွီး မငျး ဖိုဆှဲပေးရလိမျ့မယျ….”
“ဟာ…. အဖိုးကလညျး သားကမီးအပူမှ မခံနိုငျတာ မီးမဖုတျပဲ ဒီ အတိုငျးထုလို့မရဘူးလား အဖိုး….” “တယျ….! ဒီကလေး နဲ့တော့ ခကျတော့တာဘဲ အပူမပေးဘဲ ဒီအတိုငျးထုရငျ မငျးယူလာတဲ့ ဓားနှဈစက ငါ့ဆီရောကျမှ အစ,တဈရာ လောကျဖွဈ သှားမှာပေါ့ကှ…မှတျထားပါ မွေးလေး..! ငါ့မွေးကို အဖိုးပွောစရာ တခုကနျြသေးတယျ…
“အပူဒဏျမပေးဘဲ ဓားတလကျကို လိုရာပုံသှငျး၍ မရတတျသလို ဘာအပူပငျတခုမှ မရှိတဲ့ ဘဝတခုကိုလညျး လိုရာ ပုံသှငျးဖို့ ခကျလှပါတယျ…ဒါ့ကွောငျ့ မိဘနားနေ မိဘဆီမှာစားနကွေတဲ့ ငါ့မွေးတို့လိုအရှယျက အပူမပေးထားတဲ့ဓားနဲ့ တူတယျ။ အခုလို မငျးအဖကေ မငျးကိုအပူတတျပေးတာ မငျးကို ပုံသှငျးလိုကျတာနဲ့ တူတူပါဘဲ မွေးလေးရဲ့…
လောကမှာ ပူပငျဒုက်ခတှမြေားလာလလေေ ကိုယျ့ဘဝအတှကျ အမွငျကယျြလလေပေါ။ အဲ့ဒီလို အမွငျကယျြလလေေ ကိုယျ့ဘဝအတှကျ ကိုယျ လိုရာပုံ သှငျးလို့ရလလေပေါဘဲ မွေးလေး…မိမိဘဝ မိမိဒုက်ခနဲ့ မိမိရငျမဆိုငျခငျအခြိနျဟာ. ! ဓားကောငျးတလကျရရှိဖို့ ရိုကျနှကျထုထောငျး ပုံသှငျးနကွေတဲ့ အဖိုးတို့လို ပနျးဘဲဆရာတှေ ရှိမှ ဖွဈနိုငျသလို… ငါ့မွေးတို့ လို အရှယျတှအေတှကျ သားကောငျးရတနာ တဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျ ဟိနျးဟောကျ ခွိမျးခွောကျ တတျတဲ့ မိဘ ဆရာ သမားကောငျးတှေ ရှိမှဖွဈမယျ ငါ့မွေးရဲ့….”
” သား နားလညျပါပွီ အဘိုး….”